Tilmaamaha Cuntada WIC ee Hampshire Cusub | JPMA, Inc.
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadamiga
Qeybta Adeegyada Caafimaadka Dadweynaha
Qeybta Adeegyada Nafaqada
Cunnooyinka dhallaanka ah
Kaydso Magacyada Astaanada
100% Casiirka Miraha
Faa'iidada miraha iyo khudradda
Xulasho Cunno Cusub oo Ku-meelgaar ah lagu daray
TAP wixii macluumaad dheeri ah
Xulashada ukunta cusub ayaa lagu daray
Waxaan dejinay dhowr ka mid ah xannibaadaha ukunta, anagoo ku darin takhasus iyo dabiici ahaan, si looga caawiyo baahiyahaaga wax soo iibsiga. Waxaan kaa codsaneynaa inaad wali isku daydid inaad iibsato ukunta caadiga ah markaad diyaar u tahay inaad kiciso qarashyo!
Bilaabayaa: Wac ama u tag waxyaabaha soo socda si aad u hubiso isu-dheellitirka koontadaada.
Adeegga Macaamiisha: 1-855-279-0680
Websaydhka Kaarka: www.WICConnect.com
Ka xulo NH WIC menu-ka hoos u dhaca.
Guji abuur akoon isticmaale, waxaad u baahan doontaa cinwaanka boostada cinwaanka lambar cinwaan, taariikhda dhalasho iyo lambarka kaarka.
Waxa kale oo aad adeegsan kartaa risiidhkii kuugu dambeeyay ee dukaanka ama waxaad ku samayn kartaa jeegga dheelitirka dukaanka.
Ka adeegashada kaarkaaga eWIC:Ka raadi NH WIC oo la aqbalay Halkan saxiix ka hor intaadan wax iibsan. U adeegso waxyaabaha soo socda sidii hage loogu talagalay sida
in la sameeyo macaamil xawilaadda eWIC. Tallaabooyinka ayaa yeelan kara kala duwanaansho yar dukaanka ilaa bakhaarka.
Xullo cuntooyinkaaga WIC adoo adeegsanaya dheelitirka faa'iidooyinka reerkaaga iyo Liiska Cuntada WIC ee NHS / Smart Shopper App.
Haddii dukaanku adeegsado meel agtiisa agteeda agteeda, waxaad u baahan tahay inaad alaabta WIC ka soocaan iibsiyada kale.
Khasnajigu wuxuu aasaasayaa agabka cuntada ee WIC.
Kaadid kaarkaaga eWIC. Had iyo jeer isticmaal kaarkaaga eWIC ka hor qaababka kale ee lacag bixinta.
Ansixi cuntooyinka lagu soo gatay kaarkaaga eWIC.
Qaado kaarkaaga iyo risiidhkaaga. Rasiidhadaadu waxay muujineysaa waxaad soo iibsatay iyo wixii kaaga hadhay dheelitirkaaga macaashka.
Taariikho ansax ah: Fiiri taariikhaha ku taxan liiska gargaaradaada. Adeegso Macaashkaagu ku dhex jiro taariikhaha ku taxan.
Dukaamaysiga smart: Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad iibsato sumad dukaanka ama noocyo ganacsi oo qaali ah markay suurtagal tahay.
Dukaanada iyo kuubannada soosaarayaasha iyo xayeysiinta: Laga yaabaa in aad u isticmaal xayeysiinta dukaanka iyo soosaaraha soosaaraha faa'iidooyinkaaga WIC.
Tusaalooyinku waa: mid soo iibso, mid bilaash ku hel; mid soo iibso, mid ka a qiimo dhimis; wiqiyad dheeraad ah oo bilaash ah oo uu ku daray soo-saaraha;
kaydinta kaarka keydka ama kaararka abaalmarinta macmiilka; iyo soo saare Cunaanadaha-kaararka.
Xushmee shaqaalaha bakhaarka. Dabeecad Xushmad leh: Qof kasta oo ku iibiya kaarka eWIC waa inuu xushmee oo ixtiraam u muuji shaqaalaha. Shaqaalaha bakhaarka waa inay ahaadaan ixtiraam iyo xushmad u leh kaarka eWIC sidoo kale.
Iibinta, laabtay, ama soo celinta cuntada WIC lama oggola.
Waxaa laga yaabaa inaadan helin lacag celinta, kaararka hadiyadda, isbedelka, jeegagga roobka, ama IOU oo lagu beddelo foojarrada WIc, cuntada ama caanobooraha. Kaliya cuntooyinka cilladaysan, xumaaday ama duugoobay / qaaciddada ayaa lagu beddeli karaa isla badeecadda isla alaabtaas.
Caanaha dhalada ah ee lagu iibsado foojarrada WIC looma badali karo nooc kale oo ah nooc formula ah. Wixii isbeddel ah oo ah qaaciddada waa inay sameysaa xafiiskaaga WIC ee deegaankaaga.
Adiga iyo ilmahaaguba waa laga saari kartaan barnaamijka Wic-ga ee iibinta cuntooyinka WIC ama iskudayashada inaad lacag u soo celisaan cuntooyinka WIC.